Febraayo | 2009 | WEEJIDOW
Archive for Febraayo, 2009
Xukuumadda Midnimada Qaran ee Soomaaliya oo shaacisay tallaabooyinka ugu horreeya oo ay qaadeyso
Febraayo 27, 2009
Xukuumadda Midnimada Qaran ee Soomaaliya oo u soo guurtay Magaalada Mqudisho ee caasimadda Dalka Soomaaliya kadib markii lagu dhisay Dalka Jibouti ayaa shaaca ka qaaday tallaabooyinka ugu horeeya ee ay ku howlgeleyso.
Wasiirka Qorsheynta iyo Ikaashiga Caalamiga ah ee Xukuumadda Midnimada Qaran ee Soomaaliya C/raxmaan C/Shakuur Warsame ayaa sheegay in Xukuumadda uu ka tirsan yahay ay u howlgeli doonto wax ka qabashada afar qodob oo kala ah:
-Sii wadida Dib u heshiisiinta, si loogu soo daro dad aan ka mid ahayn Dowladda.
-Sugidda Ammaanka Dalka iyo qaabeynta Ciidamada Qaranka.
-Dib u soo celinta Dadkii ka barakacay Soomaaliya, gaar ahaan Magaalada Muqdisho.
-Iyo Dhisidda maamullo uu yeesho dalka Soomaaliya.
C/raxmaan C/shakuur Warsame waxaa uu soo dhaweeyay dadaallo ay wadaan Culumaa’udiinka Soomaaliyeed ee gudaha dalka ku sugan, Culumaa’udiin ka yimid Caalamka iyo weliba Odayaasha Dhaqanka iyo Midnimada Beelaha Hawiye, wuxuuna sheegay in dadaalladaas ay yihiin kuwo loo baahnaa.
Dhanka kalena, Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamoiga ah ee Xukuumadda Midnimada Qaran ee Soomaaliya waxaa uu ka hadlay dagaallo maalmihii ka tegay ka dhacayay magaalada Muqdisho, wuxuuna sheegay in dagaalladaas ay ahaayeen kuwo macno darro ah oo aan loo baahneyn, wuxuuna carrabka ku dhuftay in Culumaa’udiinka, Odayaasha dhaqanka iyo Aqoonyahannada Soomaaliyeed ay caddeeyeen in aan loo baahneyn dagaallo dambe oo ka dhaca dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo sheegay in uu ka xunyahay duqeyntii ciidamada AMISOM ay u geysteen shacbiga Soomaaliyeed ee reer Muqdisho.
Wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in uu aad uga xunyahay duqeyntii ciidamada midowga Africa ay u geysteen shacabka Soomaaliyeed maalmihii la soo dhaafay taasi oo sababtay in muwaadiniin badan oo Soomaali ah ay dhintaan kuwa kalena ay dhaawacmaan.
Saleemaan Colaad Roobe oo ah Wasiirka Dhalinyarada iyo Sportiga ee xukuumadda Soomaaliya islamarkaana ka mid ahaa xubnihii shalay soo gaaray magaalada Muqdisho oo maanta shir jaraa’id ku qabtay gudaha magaalada ayaa sheegay in uu ka xunyahay duqeyntii ay ciidamada AMISOM ka geysteen qeybo ka mid ah gobolka Banaadir,isagoona tilmaamay in la sii barakiciyay shacbiga Soomaaliyeed oo guryahooda dib ugu soo noqonayay.
“Waan ku xunahay in AMISOM oo ay duqeyso dad Soomaaliyeed oo haatan guryahoodii dib ugu soo laabanay,haatana bilaabay in ay sii cararaan,waxaana rajeynaynaa in arintaasi iyada ah ay istaagto,AMISOM-na dalka waa laga saari doonaa”ayuu Yiri Wasiirka Dhalinyarada iyo Sportiga xukuumadda Ra’iisul wasaara Cumar C/rashiid Cali.
Saleemaan Colaad Rooble waxaa uu sidoo kale sheegay in loo baahanyahay in shacbiga Soomaaliyeed ay heshiiyaan si dalka looga saaro ciidamada Shisheeye ay si dhab gacmaha isaga qabsadaan si arintaasi ay u fududaato.
Hadalkaan ka soo yeeray wasiirka dhalinyarada iyo Sportiga ee Xukuumadda Soomaaliya Saleemaan Colaad Rooble ayaa waxaa uu ku soo aadayaa xili maalmihii u dambeeyay dagaalo iyo duqeymo dad badani ku dhinteen ay ka dhaceen qeybo ka mid ah Magaalada Muqdisho kuwaasi oo u dhaxeeyay xoogaga Xisbul Islaam iyo ciidamada dowladda oo garab ka helaya ciidamada AMISOM.
Dhanka kale waxaa maanta duhurkii garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka soo dagay xubno ka tirsan dowladda KMG oo isugu jira xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya,waxaana xunhaani ay qeyb ka yihiin kuwii maalmihii la soo dhaafay ku soo qul qulayay gudaha magaalada Muqdisho
Wasiirada maanta soo dagay qaarkood ayaa idaacada Shabelle u sheegay in saacadaha soo aadan uu garoonka ka soo dagi dooni gudoomiyaha Barlamanka Sheekh Aadan Madoobe oo ay la socdaan xubno kale oo ka tirsan dowladda Midnimada qaran.
Ra’isal wasaaraha Soomaaliya Cumar cabdi rashiid oo kulan isugu yeeray golahiisa wasiirada
Ka dib markii inta badan wasiiradii iyo xildhibaanadii dowlada soomaaliya ay ku soo laabteen dalka soomaaliya ayaa Ra’isal wasaaraha Soomaaliya Cumar Sharma’arke wuxuu sheegay in maalinta berri ah uu kulan la qaadan doono golahiisa waiirada iyagoo ka wada hadli doona arimaha maanka iyo sida ay dolwadiisa ku shaeyn karto.
Ku soo laabshada magaalada Muqdisho ee xubnaha dowlada soomaaliya ayaa timid iyadoo muddo labo maalmood ay geeriyoodeen 40 qof in ka badan tiro intaasi dhaafsiisan ay dhaawac ka soo gaareen dagaladii muqdisho ka dhacayay beryihii la soo dhaafay, tasoo cadeyneysaa inay jiraan kooxo weli ay ka go’an tahay inay la dagaalamaan dowlada Somaliya.
Wasiirka ganacsiga Cabdi rashiid cirro oo u waramayay idacada VOA qeybteeda afka inagriisiga ku baxda ayaa sheegay in sababta dalka ay ugu soo laabteen ay tahay si ay u bilaabaan howlihii xukuumada horyyilay oo ay ugu horeyso arimaha amaanka . Wuxu intaa ku daray wasiirku in Ra’isal wasaaraha uu kulan isugu yeeray berri oo sabti ah golaha wasiirada.
Cabd rashiid cirro ayaa ka gaabsaday waxyaabaha la doonayo in berry kulanka looga hadlo isagoo sheegay inay taasi u taalo ra’isal wasaaraha uuna ajandaha isaga soo hor dhigi doono golaha wasiirada oo ay ka maqan yihiin xubno iska casilay oo weli aan arimhaasi la dhameyn.
Wuxuu intaa u daray in taalaboyinka hatan ugu horeeya ee ay qaadi doonaan ay ka mid tahay dhisida ciidamada boliiska iyo garsoorka isagoo yiri waxaan kaloo wax ka qabenyaa dhismayaasha xabisyada magaalada Muqdisho kuwasoo lagu tilmamo mid xaaladooda ay aad u liidato.
Mar wax laga weydiiyay inay wada hadal la furayaan dhinacyda ka soo horjeeda ayaa waxa uu sheegay in dhinacooda ay diyaar yihiin in la wada hadlo sida uu sheegay madaxweynaha, wuxu sheegay in haatan aan loo baahneyn dagaalo soo noq noqdo ay shacab soomaalieed lagu baab’iyo.
Markii ugu horeysay ayaa berri la filayaa inay kulan wada qataan xubno dagaal ba’an uu ka dhaxeyn jiray oo kala taabacsana dowlada uu hogaaminayay yuusuf iyo maxakmadahii islamiga, waxaa isha lagu heyn doonaa sida ay u wada shaqeeyaan oo ay u noqdaan kuwa hal u jeedo iyo hal aragti wadaaga.
Isrisaaseyn ay dad ku dhinteen oo maanta ka dhacday degmada Kaaraan ee magaalada Muqidishio
Muqdisho:2 ruux ayaa ku geeriiyootay 2 kalana dhaawacyo ayaa kasoo gaartay kadib marki ay isku rasaaseyen Suuqa Degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho labo koox oo ka wada tirsan ciidamada Dowlada KMG Somalia.
Israsaaseyntan dhimashada sababtay ayaa waxaa ay ka danbeysay kadib marki kooxo ka tirsan ciidamada Dowlada ay isku dayeen in ay lacago baad ah ka qaataan baabuur dhuxul waday oo kusoo xirtay Suuqa degmada Kaaraan hase yeeshee waxaa arrintaasi kasoo hrjeestay koox kale oo ka tirsanaa cidamada Dowlada oo la sheegay in ay haray baabuurkan lacago baad ah uga soo qaatay kadibna usoo damaanad qaaday in ay ka badbaadin doonaan kooxaha isku daya in ay dhacaan ama lacago ka qaatan.
Labada ruux ee geeriyootay ayaa waxaa ay ahaayeen dad rayid ah oo mid ka mid ah waxaa uu ahaa xamaali dajianayey baaburka halka qofka kalaa uu marayey halka iska hor imaadku uu ka dhacay, balse labada kale ee dhaawacantay ayaa ahaa kooxihi iska so horjeeday.
Arrintaan ayaa waxaa walaac ka muujiyey ganacsatada Suuqa Kaaraan oo sheegay in maalmihi lasoo dhaafay ay ka jireen dhibaatooyin ay kooxo ka tirsan ciidamada Dowlada ku hayeen goobahooda ganacsiga,waxaana uu ka codsaday ciidamada Dowlada cusub gaar ahaan kuwa uu madaxda ka yahay Sheekh C/qadir Cali Cumar in ay wax ka qabtaan dhibaatada ka taagan degmada Kaaraan.
Suuqa degmada Kaaraan ayaa indhawaalaba waxaa ka taagnaa fowdo iyo suuqyari kadib markii kooxo taabacsan dowlada KMG Somalia ay kusoo rogeen lacago baad ah gaadiidki keeni jiray caanaha,qudaarta iyo kuwi ka imaan jiray deegaanada Ceelmacaan iyo Warsheekh.
War Deg Deg ah: Xildhibaan ka tirsa Baarlamaanka Midnimada Qaran ee Somalia oo lagu xiray magaalada Hargeysa
Hargeysa: Ciidamada amaanka ee mamul gobaleedka Soomaaliland ayaa gacanta waxa ay ku dhigeen maanta galinkii hore mudane maxamuud maxamed farax (Indha-buur )kaasi oo katirsan dowlada midnimada qaran ee Somaliya mar uu ka soo dagtay garoonka duradaha harkeesa ee Cigaal.
Mudane Indha-buur aya waxa uu la socdau diyaarada Daalo taasi oo ka mid ah shirkadaha duulimaadka ee ka shaqeeya dalka Somaliya wararka ayaa sheegayaan in uu ka soo gictamay magaalada Jabuuti asigoo u soo jeeday Moqdisho .
Wasiirka arimaha gudaha ee Somalilanda C/laahi Ismaaciil Ciro ayaa xaqiijiyey xariga loo geystay mudanaha ka tirsan Baarlamaanka Midnimada Qaran ee Soomaalia Mr Indhabuur,hase yeeshee waxaa uu ka gaabsaday in uu faahfaahin dheeri ah ka baxsho xarigha mas,uulkaan.
Baarlamaanka Soomaaliland ayaa ku dalbaday Dowlada in ay maxkamad soo taagaan mas,uulkaan maadaama uu horay uga tirsanaa maamulka Somaliland,iyadoona uu sharci ka yaalo Somaliland siyaasiyiinta kasoo jeeda ee ku biira dowlada Soomaalia in ay muteysan karaan ciqaab adag.
Baarlamaanka ayaa kusoo oogay dacwad ah qiyaano qaran iyo in uu lunsaday hantida qaranka Soomaaliland sida ay hadalka udhigeen kadib markii uu ku guuldareeystay in uu dib usoo celiyo gaari uu lahaa maamulka gobolka Sool oo uu gudoomiye ku xigeen ka ahaa.
Ma jiraan wax hadal ah oo kasoo baxay Baarlamaanka Midnimada Qaran ee Soomaalia oo ku saabsan xariga Xildhibaan Maxamdud Maxamed faarax.
Abu-Mansuur oo maanta lagu wado inuu meel fagaare ah kala hadlo shacabka degmada Xudur
Febraayo 26, 2009
Xudur: Wararka naga soo gaaraya degmada Xudur ee gobolka Bakool, waa saakay halkaasi ka soconaya qaban-qaabada dibadbaxyo ay samaynayaan shacabka ku dhaqan degmada Xudur kaasoo ay ku taageerayaan kuna soo dhoweynayaan Ururka Al-shabaab ee la wareegay gacan ku haynta degmadaasi.
Dhammaan dadwaynaha ku dhaqan Degmada Xudur ayaa lagu wargeliyay inaanay furin goobahooda ganacsiga isla markaana ay isugu yimaadaan fagaare ku yaalla gudaha degmada Xudur si ay u muujiyaan rabitaankooda ku aaddan la wareeigga xoogagga Al-shabaab ee degmada Xudur, waxaana gudaha degmada saakay dhex maraya gawaari ay ku xiran yihiin sameecado oo dadka ku wargelinaya inay isu soo baxaan.
Sheekh Mukhtaar Roobow Cali (Abu-Mansuur) afahayeenka Xarakada hubeysan ee Al-shabaab Sheekh Mukhtaar Roobow Cali (Abu-Mansuur) ayaa la filayaa inuu hadal ka jeediyo fagaaro ku yaalla degmada Xudur oo ay isugu baxayaan dadwaynaha ku dhaqan degmada Xudur, waxaana dhinaca gudaha degmada ka soconaya dhaq-dhaqaaqyo ay wadaan xoogagga Al-shabaab oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka degmada iyo daafaheeda.
Dadka deegaanka Xudur ayaa waxa ay kuu sheegayaan in ay cabsi dareemayaa taasi oo ku saleesan weerar rugaal celis ah ay soo qaadaan xubnihii ka tirsanaa Masuuliyiintii maamullada gobolada Bay & Bakool ee dawladda federalka ay ka carareen degmada iyagoo haatan gaaf wareegaya degmadaasi .
Ra’iisal Wasaare Cumar C/rashiid oo ka degay Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Midnimada Qaran ee Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharma-arke iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa galabta ka degay Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Ra’iisal Wasaaraha oo ay Wafdigiisa ka mid ahaayeen xubno ka tirsan Golahiisa Wasiirrada oo laga xusay ku xigeenkiisa, ahna Wasiirka Maaliyadda Shariif Xasan Shiikh Aadan iyo Wasiirka Isboortiga Saleebaan Colaad Rooble ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Ra’iisal Wasaaraha oo ay u tahay markii ugu horeysay oo uu Muqdisho yimaado isagoo xil dowladeed haya ayaa markii uu diyaaradda ka soo degayay waxaa la arkayay iyadoo ay la socoto ilaalo gaar ah oo la sheegay in ay ka soo raaceen Dalka Jibouti.
Imaatinka Ra’iisal Wasaare Cumar C/rashiid ee Muqdishu ayaa wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo ay magaalada Muqdisho ka soo cusboonaadeen dagaallo u dhaxeeya Ciidamada Dowladda Midnimada Qaran iyo kuwa Amisom oo isku dhinac ah iyo Xoogag ka amar qaata Xisbul-Islaam oo ka soo horjeeda, kuwaasi oo geystay khasaare dhimasho ah iyo dhaawac ah oo soo gaaray dad rayid ah oo aad u badan.
Xukuumadda uu madaxda ka yahay Ra’iisal Wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharma-arke ayaa waxaa hortaalla howl baaxad leh oo ay ugu horeyso nabadeynta Dalka, gaar ahaan Magaalada Muqdisho, sii wadida dib u heshiisiinta iyo weliba u gargaaridda dadkii ku barakacay dagaalladii Muqdisho ka dhacay intii ay Ciidamada Itoobiyaanka ku sugnaayeen.
Maalmaha soo socda ayaa iyana la filayaa in ay Muqdisho soo gaaraan Guddoomiyaha Baarlamaanka Shiikh Aadan Madoobe iyo wafdi uu hoggaaminayo oo u badnaan doona Xildhibaannada Dowladda ee weli ku harsan Dalka Jibouti.
Ugu dambeyntiina, Xubnaha Dowladda Midnimada Qaran ee Soomaaliya oo tan iyo dhamaadkii bishii hore ku sugnaa Dalka Jibouti ayaa haatan waxay ku soo noqonayaan Dalka Soomaaliya, shalay ayayna ahayd markii Xildhibaanno ku dhow 100 mudane oo ka tirsan Dowladda Soomaaliya ay soo gaareen Magaalada Muqdisho.
War Deg Deg: Ilaa 11 ruux oo maanta ku dhaawacantay Madaafiic ku dhacday qeybo ka mid ah Degmada Hodan oo la is weydaarsaday
Madaafiic goos goos ah oo maanta duhurkii la isku weydaarsaday qeybo ka mid ah Degmada Hodan ayaa sababay dhaawaca dad gaaraya 11 ruux, kuwaasoo la dhigay Cusbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho.
Madaafiicdan oo ay is weydaarsadeen dhinacyada labadii maalmood ku dagaalamayay Degmada Hodan, iyadoona la sheegay in wali is hor fadhiyaan dhinacyada wada dagaalamay.
Dadka ku dhaqan Degmada Hodan ayaa sheegay in Madaafiicda oo ahaa kuwo goos goos ah ay ku soo dhacday Xaafadaha degmada Hodan, taasoo dad rayid ah ay waxyeelo ka soo gaartay.
Ciidamada AMISOM kuwa Dowladda KMG oo wada socda iyo Xoogaga Xisbul Islaam oo labadii maalmood u dhaxeeyay dagaalo ayaa wali isku hor fadhiya goobihii ay ku dagaalameen, waxaana mararka qaar ay is weydaarsanayaan rasaas goos goos ah.
Saameynta Dagaaladii labadii maalmood iyo xiisada wali jirta ayaa ku yeelatay dhaq dhaqaaqa gaadiidka iyo ganacsiga wadada Maka Almukarama, Isgoyska KM4 ilaa Zoope, halkaasoo la soo dhoobay gaadiid dagaal oo ay ku jiraan Taangiyo.
Inkastoo Xaalada ay ka yara degan tahay sida labadii maalmood ay aheyd, ayaa hadana la isku haleyn karin waxa xigaya, bacdamaa daqiiqad kasta ay wax is badali karaan, isla markaana ay suura gal tahay in wali dirirtu ka dhex bilaabato.
Xaafadaha qaar ee Degmada Hodan waxaa ka socda barakac ballaaran, waxaana dib mar kale u barakacay qoysas dib ugu soo laabto guryahoodii, markii ay dareemeen saan saanta nabadeed kadib bixitaankii Ciidamada Ethiopia ee bishii hore.
Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay Dagaal ka dhacay Deegaano muran ka aloosan yahay oo Somaliland ka tirsan
Laba qof ayaa ku dhintay, ugu yaraan sideed kalena way ku dhaawacmeen dagaal shalay ka dhacay deegaan u dhexeeya degmooyinka Gabiley iyo Baki ee Gobollada Gabiley iyo Awdal ee Somaliland.
Dagaalkan oo dhexmaray laba maleeshiyo beelood oo wada degan deegaankaasi, waxa uu sida la sheegay bilaabmay Duhurnimadii shalay, iyada oo aan xogo sugan laga helin ilaa xalay fiidkii. Labadan dhinac ee dagaalku dhexmaray oo in muddo ahba muran u dhexeeyay, waxa khilaafkoodaa shalay gacan ka hadalka keenay salka ku hayaa muran dhul-beereed u badan oo u dhexeeya degmada Gabiley iyo Baki.
Inkastoo sida la sheegay deegaamadaa muranku ka oogan yahay qaybo ka mid ah hore Xukuumadda Somaliland Ciidan ugu dirtay, haddana dagaalkan shalay ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel ka durugsan goobta ciidanku fadhiyaan, halkaasoo sida wararku sheegeen u dhow meel lagu magacaabo Buqdhada.. “Xukuumadda waxaanu isku ogayn in la sameeyo guddi khilaafkaa (muranka dhulka) dhamaysa oo qolo walba xaqeeda si Caddaalad ah u kala siisa, arrintaana si degdeg ah loo galo. Markaa shan oday baa nalagaga saxeexay damaanadaa, xaga kalena shan oday baa laga saxeexay. Sidaa darteed, sidii aanu u filaynay in maanta (shalay) la diro guddigii Guurtida iyo Xukuumadda ee dhexdhexaadka ahayd, ayuun baa abaaro 10:30-kii weerar lagu soo qaaday 20 inan oo beerahoodii iska jooga meesha la yidhaahdo Gacanka-madow. Markaa laba qof baa ku dhintay, lix kalena way dhaawacmeen.” Sidaa waxa yidhi Suldaan Ismaaciil Sul. Cabdiraxmaan oo ka mid ah Madaxdhaqameedka degmada Gabiley.
Wuxuuna intaa ku daray in labada qof ee ku dhintay magacyadoodu kala yihiin; Sayid Maxamed Xusseen Cige iyo Maxamed Xassan Xaaji Raage, kuwaasoo xalay lagu aasay degmada Gabiley. Waxa kale oo uu tilmaamay inay jiraan lix kale oo dhinacooda kaga dhaawacmay dagaalkaas, wuxuuna tilmaamay in aanay haatan xaaladda deegaankaa ka taagani wanaagsanayn, isla markaana ay sugayaan talaabada Xukuumaddu qaado. Waxa uu Xukuumadda ugu baaqay inay si degdeg ah wax uga qabato dhacdadaas, isla markaana waxa uu shacbiga u soo jeediyay in la ilaaliyo Nabadgelyada oo aan dadka reernimo lagu waxyeelayn. Sidoo kale, waxa uu ka sokow Xukuumadda, goleyaasha qaranka gaar ahaan Golaha Guurtidu ku dhaliilay in aanay qaadanin doorkii ay ku lahaayeen arrintaas, kana gaabiyeen soo dhexgelida murankan.
Degmada Ceelbarde oo maanta kulan kuwada qaatay saraakiil Itoobiyaan ah iyo xubnihii shalay halkaasi gaaray.
Ceelbarde-Bakool: Gudaha degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool oo ku taala xadka ay wadaagaan gobolka Bakool iyo dalka Itoobiya ayaa maanta waxaa kulan albaada u xiran halkaasi ku yeeshay saraakiil Itoobiyaan ah iyo xubnihii dowladda.
Kulanka oo qaatay saacado badan ayaa waxaa uu ahaa mid ay uga wada hadlayeen xaaladda guud ee gobolka Bakool iyo sidii dib loo qabsan lahaa degmada Xudur ee gobolka Bakool oo iminka shabaabka ay maamulaan.
Sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah mas`uuliyiintaasi dowladda soomaaliya ee maanta kulanka la qaatay saraakiil Itoobiyaan ah oo degmada Ceelbarde soo gaaray ayaa waxa ay dalbadeen waa kuwa dowladda soomaaliya in ciidamo ay u soo dirto dowladda Itoobiya.
Hadaba lama saadaalin karo in dowladda Itoobiya ciidamo caawimaad ah ay u soo direyso iyo waliba in kale mas`uuliyiinta dowladda ee degmada Ceelbarde ku jahwareersan.
Waxaana wararka ay sheegayaan in saraakiisha Itoobiyaanka ah markii ay kulan kooda ay dhameysteen ay dib ugu noqdeen gudaha degmada Itoobiya ee markii hore ay ka yimaadeen.
Waxaana kulamadani ay dhacaan xilli qeybaha kala duwan ee bulshada kudhaqan degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool tan iyo shalay la soo gudubtay cabsi iyo wal wal xoogan ay ka qabaan in halkaasi ay ku dagaalamaan ciidamada dowaldda iyo xoogaga AL-shabaab.
Waxaana wali jira dhaq dhaqaaqyo xoogan iyo abaabulo oo degmada Ceelbarde ay ka wadaan ciidamada dowladda KMG soomaaliya taabansan maamulada Bay iyo Bakool kaa oo aan la ogeyn halka uu ku wajahanyahay.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Febraayo, 2009.